Macaamiishu waxay u baahan yihiin hal sabab oo keliya si ay u xanaaqaan oo ay uga baxaan. Nasiib darro, ganacsiyadu waxay siiyaan sababo badan oo iyaga ka mid ah. Waxaa badanaa loogu yeeraa "7 Dembiyada Adeegga," iyo shirkado badan oo aan ogeyn inay u oggolaadaan inay dhacaan. Caadi ahaan waa natiijada ka dhalata faa'iidooyinka safka hore oo si hoose loo tababaray, si xad dhaaf ah...
Macaamiisha lumay waxay u taagan yihiin fursad wayn. Macaamiishii hore waxay fahmeen alaabtaada, iyo sida ay u shaqeyso. Intaa waxaa dheer, waxay inta badan ka tageen sababo si fudud loo saxo. Maxay macaamiishu uga baxaan? Haddii aad ogtahay sababta macaamiishu uga baxaan, aad bay u fududahay inaad dib ugu guulaysato. Waa kuwan sababaha ugu sarreeya w...
Furitaanka wicitaanada qabow oo wata fariin sax ah: Furaha rajada
Weydii qof kasta oo wax iibiya qayb ka mid ah iibinta ee ay aadka u neceb yihiin, tanina waxay u badan tahay inay noqon doonto jawaabtooda: qabow-wacitaan. Si kasta oo ay u tababaran yihiin si ay ula tashadaan oo ay macaamiisha diiradda u saaraan, qaar ka mid ah dadka wax iibinaya ayaa iska caabiya abuurista dhuumaha rajada ee u heellan wicitaannada qabow. Laakiin taasi wali waa...
Ma doonaysaa inaad horumariso waayo-aragnimada macmiilka? U dhaqan sida bilawga
Qoraaga Karen Lamb ayaa qoray, "Sannad hadda ka dib, waxaad jeclaan lahayd inaad maanta bilowday." Waa fikradda bilawga ugu kobcaya ee u qaaday khibradda macaamiisha. Hay'ad kasta oo rabta inay horumariso waayo-aragnimada macaamiisha waxay rabi doontaa inay iyaduna qaadato. Hadii aad ka fikirayso dib u soo noolaynta...
Sida loo mideeyo iimaylka iyo warbaahinta bulshada si loo helo khibrado wanaagsan oo macmiil ah
Shirkadaha intooda badani waxay isticmaalaan iimaylka iyo warbaahinta bulshada si ay ula xiriiraan macaamiisha. Isku-dar labada, waxaadna kordhin kartaa khibradda macmiilka. Tixgeli sida waxtarka leh ee habka laba-madaxa leh uu ku salaysnaan karo inta mid kasta hadda la isticmaalo, marka loo eego cilmi-baaris laga sameeyay Baraha Bulshada Maanta: 92% dadka qaangaarka ah ee khadka tooska ah annaga ...
Burburinta khuraafaadka iibka ee ugu weyn abid
Iibintu waa ciyaar tirooyin, ama si la mid ah odhaahda caanka ah ayaa tidhaahda. Haddii aad samayso wicitaano kugu filan, kulamo kugu filan, oo aad bixiso bandhigyo kugu filan, waad guulaysan doontaa. Waxa ugu wanagsan, "maya" kasta oo aad maqashid waxa ay kuu soo dhawaynaysaa "haa." Tani weli ma la rumaysan karaa? Ma jiro tilmaame muujinaya guusha iibka Th...
6 talo oo la raaco ka hor inta uusan gorgortan bilaabmin
Sideed u filan kartaa inaad "haa" ku gaadho wada xaajoodka haddi aanad naftaada "haa" ka helin ka hor gorgortanka? Inaad ku tidhaahdo "haa" naftaada si naxariis leh waa inay timaadaa ka hor inta aanad la xaajoon macaamiisha. Halkan waxaa ah lix talo oo kaa caawin doona inaad gorgortankaaga ku bilowdid bilow wanaagsan...
Marka macmiilku ku diido: 6 tillaabo oo dib loogu soo celinayo
Diidmada waa qayb weyn oo ka mid ah nolosha iibiye kasta. Dadka wax iibinaya ee la diiday in ka badan inta badan waxay u janjeeraan inay ka guulaystaan ​​inta badan. Waxay fahmeen khatarta-abaalmarinta ganacsiga ee diidmada ay keeni karto, iyo sidoo kale waayo-aragnimada waxbarasho ee laga helay diidmada. Dib u noqo Haddi aad ku sugan tahay meel...
4 siyaabood oo aad ku ogaan karto waxa macaamiishaadu rabaan
Ganacsiyada qaar ayaa dadaalkooda wax iibinta ku saleeya mala awaal iyo dareen. Laakiin kuwa ugu guulaha badan waxay horumariyaan aqoon qoto dheer oo ku saabsan macaamiisha waxayna ku hagaajiyaan dadaalkooda wax iibinta si ay wax uga qabtaan baahiyaha iyo yoolalka macaamiisha. Fahamka baahiyahooda Fahamka waxa rajadu u baahan yihiin, disc...
Wakhtiga la ruxayo Todobaadka Adeegga Macmiilka Qaranka
by admin 21-10-05
Haddi ay khubarada waayo-aragnimada macmiilka ahi ay ka shaqeeyaan goobta ama meel fog, waa wakhtiga sanadka si aad u dabaaldegto iyaga, macaamiishaada iyo dhammaan khibradaha waaweyn. Waxay ku dhowdahay toddobaadka adeegga macaamiisha qaranka - waxaana kuu haynaa qorshayaal. Dabaaldegga sannadlaha ah waa toddobaadka shaqo ee ugu horreeya ee Octo...
Waxaa jira 4 nooc oo macaamiil ah: Sida loola dhaqmo mid kasta
Iibintu waxay la mid tahay khamaarka siyaabo badan. Guusha ganacsiga iyo khamaarka labadaba waxay u baahan tahay macluumaad wanaagsan, neerfayaasha birta ah, dulqaad iyo kartida inaad is dejiso. Fahamka ciyaarta rajada ka hor inta aanad la fadhiisan macaamiisha mustaqbalka, isku day inaad go'aamiso ciyaarta macmiilku yahay...
Heerarka 5 ee ballanqaadka macaamiisha - iyo waxa run ahaantii horseeda daacadnimada
Ballanqaadka macaamilka ayaa la barbar dhigi karaa quruxda - kaliya maqaarka qoto dheer. Nasiib wanaag, waxaad halkaas ka dhisi kartaa xiriir xooggan iyo daacadnimo. Macaamiisha waxay noqon karaan kuwo ay ka go'an tahay badeecadaha, adeegyada iyo shirkadaha shan heerar oo kala duwan, sida lagu sheegay cilmi-baaris cusub oo ka timid Jaamacadda Rice. s cusub...
123456 Xiga > >> Bogga 1/7